Canalys Inoti 3,5 Miriyoni Apple Kuona Yakatengeswa muQ2 | Ndinobva mac
Canalys Inoti 3,5 Miriyoni Apple Kuona Yakatengeswa muQ2
Sezvatinogara tichitaura muzviitiko izvi, huwandu hwacho hahusi hwechokwadi sezvo Apple pachayo isingape ruzivo urwu zviri pamutemo uye nekudaro iwo anoratidza data. Canalys, inova kambani inogadzira rudzi urwu rwechirevo kota yega yega kuti ive nenhamba yekutengesa wachi, inoti izvozvo anenge mamirioni 2 mamirioni akatumirwa muiyi Q3,5 yeiyo smart wachi.
Zvinotaridza kuti mhando inotsvakwa zvakanyanya ndiyo isiri kutengeswa pasirese uye ndeyekuti Apple Watch LTE haisati yawanikwa kune dzimwe nyika (yekupedzisira kuigamuchira yaive Sweden, India, Denmark neTaiwan), kunyanya Spain ndiyo mumwe wavo uye Ngatitarisirei kuti izvi zvichachinja nekutanga kweApple Watch Series 4.
China kukosha kwakachengeteka kweApple
Zvinotaridza kuti kuwedzera kwekutengesa kweApple Watch Series 3 LTE ine imwe kukosha nekuda kwekutengesa kuChina. Pasina kupokana, kuve nemusika mukuru uyu padivi pako chinhu chakanakira vagadziri uye mune iyo Apple hazvisi izvo, saka nekuda kwavo, kutengesa kwawedzera. Makumi mazana maviri nemakumi mashanu panguva iyi Q2.
Hatinzwisise chaizvo nei Apple isinga vape yepamutemo yekutengesa data yeayo smartwatches, kunyangwe dai yaive yese uye kwete mu "imwe" chikamu, asi poindi ndeyekuti kubva pakutanga haina kuzopa iyi data kumisangano yemhedzisiro yemari uye isu hatitende kuti vachachinja. Saka unofanira vimba nedhata revanoongorora uye mazwi e CEO wefemu, Tim Cook, iyo yagara ichitaura mumisangano uko kwakabvunzwa kuti kutengesa kweApple Watch kwakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Canalys Inoti 3,5 Miriyoni Apple Kuona Yakatengeswa muQ2
Aya ndiwo maitiro ekuvhurwa kweApple Piazza Liberty
Intel ingadai yakagadzirira mapurosesa matsva eMac mini